Ukuphupha nge-Hecht Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Abalobi abaninzi bafumana amehlo aqaqambileyo xa besiva igama elithi "pike." Kungenxa yokuba le ntlanzi, ethanda ukuhlala emilanjeni okanye kumachibi ahamba kancinci ngaselunxwemeni, inokuba nkulu kakhulu kwaye ke oko kubonisa ukubanjwa kobomi kwabaninzi, kodwa ipike ayithandwa kakhulu kweli candelo kuphela.
Kukwayaziwa kakhulu njengentlanzi etyiwayo. Nangona kunjalo, kunzima ukuzala ngenxa yendalo yayo kunye nokuziphatha okukhohlakeleyo.
Kodwa myalezo mni oqulathwe yipike njengophawu lokulala? Kutheni siqubha ngamaphupha ethu? Ngaba luphawu lweemvakalelo ezinomsindo apha kakhulu, okanye ngaba ikhona enye into efihlakeleyo ngasemva kwayo?
1 Uphawu lwephupha «ipike» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ipike» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ipike» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ipike» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukujongwa kwindawo yokujonga ngokubanzi, ipike ikulethela iphupha lokuvuka ebomini. ikhosi elungileyo xa usenza ishishini nawe. Ukutyelela kwangoko kunokubhengezwa ngophawu "lwePike".
Ukuthenga ipike ephupheni kuhlala kukhomba kuyo Uxinzelelo ukuya kubahlobo. Nangona kunjalo, umphuphi akasazi isizathu sale ngxaki. Mhlawumbi kuya kufuneka ufune ingcaciso ngalo mbandela. Ukuba ulunywe yipike kwiphupha lakho, kuya kufuneka uthathe ingqalelo ukusilela okwenzekileyo ngenxa yokungakhathali kwakho.
Ukuba umntu ophuphayo ubamba okanye abambe ipike ngelixa elele, baya kuba baninzi el mundo ukuvuka, ngokwenkcazo ngokubanzi yamaphupha. ingxaki yoyisa. Ukutya ipike njengephupha kukwaluphawu lokulawula zonke iingxaki ezizayo.
Ukubona kwepike emanzini ngelixa ulele kunokuqondwa njengesilumkiso sokujongana nabo Ihlabathi elinemvakalelo dibana ne. Indlela amanzi abukeka ngayo ephupheni nayo ifuna ukuba ithathelwe ingqalelo ngokusondeleyo. Ngaba yayicacile okanye imdaka? Oku kunokubonelela ngemikhondo eyongezelelweyo kumyalezo wephupha.
Uphawu lwephupha «ipike» - ukutolikwa kwengqondo
Inqanaba leengqondo lohlalutyo lwamaphupha litolika umfanekiso wephupha njengophawu lwe Akukho zingqondweni. Kwilizwe elivukayo, umphuphi kufuneka aqwalasele ngononophelo loo nto inefuthe lakhe ngokungazi.
Ukuba uyipike kwiphupha lakho, kufanelekile Ubudlelwane ukuqinisekisa. Kusenokwenzeka ukuba kwavela iingxaki apha ezingekaziwa kakuhle. Ukuba ipike ileqa okanye izingela oleleyo ephupheni lakho, isilumkiso siyacetyiswa. Kuba umntu okufutshane ubonakala enomona. Kukho umngcipheko wokulahleka.
Nabani na othi, njengomlobi, abambe ipiki kwiphupha lakhe okanye ayibambe ngomnatha wokuloba, azame ukulwela amandla ekuvukeni ubomi. Lowo ulalayo uzimisele nokuziphatha ngokungacingeli. Ukuba i-pike ibhukuda emanzini anzulu ephupheni, umphuphi mhlawumbi unoxanduva. Isiqalo esitsha ngaphambili, kodwa oko kuyakuba lilungelo kuye.
Uphawu lwephupha «ipike» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwephupha lokomoya kutolika isimboli «pike» ngengqondo yentlanzi, ke yena njengomboniso we Amandla agqithisileyo inokuqondwa. Nangona kunjalo, oku kuyakuvulela umphuphi ixesha elifutshane.